युगसम्बाद साप्ताहिक - टुट्दो राष्ट्रिय एकता र आआफ्नै व्याख्या
Monday, 01.27.2020, 07:53pm (GMT+5.5) Home Contact
टुट्दो राष्ट्रिय एकता र आआफ्नै व्याख्या
Wednesday, 01.18.2017, 12:55pm (GMT+5.5)
नेपाल इतिहासमै सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा छ । देशभित्र अनेक किसिमका वितण्डाहरूको सिर्जना भैरहेको छ भने बाहिरी शक्तिले त्यसलाई मलजल गरेर मजबुत नेपाल र एकताबद्ध नेपालीलाई कमजोर पार्दै आफ्नो औंलामा नाच्ने बनाउन खोजिरहेको छ । सोझा नेपाली जनतालाई राजनीतिक अधिकारको नाममा राजनीतिक दलकै नेताहरूमार्फत भ्रममा पारेर राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने खेल चलिरहेको छ । यो एक दशकमा नेपालको राष्ट्रिय एकता र सद्भावमाथि जेजति प्रहार भयो यो मुलुकको जग भने अझै हल्लिएको छैन । पृथ्वीनारायण शाहले हालेको एकताको जगमा नेपाल कति मजबुत भएर अडेको रहेछ भन्ने अहिले स्पष्ट हुँदैछ ।
आफ्ना नागरिकलाई एकताबद्ध बनाएर राष्ट्रिय एकता मजबुत पारेर मात्रै मुलुकको पुनःसंरचना गर्ने र समग्र पक्षलाई एकीकृत गरी समृद्ध नेपाल बनाउने जिम्मेवारी लिएकाहरू तीनतिर मुख फर्काएर बसेका छन् । राजनीतिक रुपमा मुलुकको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरूको गलत संस्कारले मुलुक अत्यन्त सम्वेदशील परिस्थितिमा छ । निर्धारित गन्तव्यमा मुलुकलाई सहज रुपमा पु¥याउने र राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरी शान्ति, समृद्धि र अमनचयन कायम गरी आर्थिक विकासमा मुलुकलाई दगुराउने अपेक्षा धुमिल हुँदैछ । अहिले आएर के देखिंदैछ भने नयाँ नेपाल निर्माणको ढोका खोल्छौं भन्नेहरूले भएकै नेपाल समेत नराख्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ । मुलुकलाई निकास दिनेभन्दा विनाश दिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि उठाइएको गलत नारा र मुद्दाहरूका कारण एकपछि अर्को समस्याहरू निम्तिरहेका छन् । मुलुक खण्डित हुने भय मडारिइरहेको छ । राष्ट्रिय एकताका कुनै पनि क्षेत्रमा धावा बोल्ने गरिएको छ । राजनीतिक अधिकारका नाममा मुलुक टुक्र्याउने खेल चलिरहेका छन् ।
मुलुक यस्तो संगीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका कारण चारैतिरबाट राष्ट्रिय एकता कायम हुनुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन् । तर, विदेशी शक्तिको आड भरोसामा टिकेकाहरू यसलाई अन्ध राष्ट्रवाद, महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भन्दै सुगारटान गरिरहेका छन् । देशको राजनीतिक परिस्थिति जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा आ–आफ्नै स्वार्थले बढी काम गरेको छ । राष्ट्रियताको सवालमा नेपालका राजनीतिक दलहरू अत्यन्त कमजोर सावित भैरहेका छन् । परिवर्तनको नाममा नेपालको मौलिक पहिचान मेट्न चाहनेहरूले कतिसम्म खेले भने त्यो भनिसाध्य छैन । पहिलो संविधानसभाको समयमा हजारौं वर्षदेखि प्रयोगमा आएको विश्वमै ख्यातिप्राप्त नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई समेत बदल्न चाहनेहरू देखिए । नेपालको झण्डाले राजतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्नेहरू निस्किए । नेपालको राष्ट्रिय पोशाकले खस–ब्राह्मणको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दै त्यसको साटो पश्चिमा मुलुकको राष्ट्रिय पोशाक ढल्काउन थालियो । यो क्रम भने बदलिंदो छ ।
राष्ट्रियताको विषय दलअनुसारको फरक र राजनीतिक स्वार्थसंग जोड्ने गरिएको हुँदा नेपाल राष्ट्रियता बचाउने आन्दोलनले मूर्तरुप लिनै पाएको छैन । पहिला नेपाली हुने कि मधेशी वा तराईवासी हुने ? नेपाली भएर मात्र हिन्दु, मुसलमान, इसाई, ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित, जनजाति, मधेशी सवै रहने हो । नेपाल नै नरहे त्यो अस्तित्व कहाँ गएर खोज्ने ? तर अहिले नेपाल सिध्याएर भए पनि आफू बाँचिरहने चरित्रको विकास भैरहेको छ । त्यसकारण राष्ट्रिय एकता खलबलिएको अवस्था छ । यसलाई एउटै मालामा उनेर एकतावद्ध गर्नु अबको चुनौती कम छैन । यो विषयलाई जसरी राजनीतिक स्वार्थको रसायनमा घोलियो त्यसले मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्ने खतराहरू झन् बढिरहेका छन् । नेपालको अस्मितामाथि विदेशीले बुट बजार्ने षड्यन्त्रलाई निम्तो दिने काम भैरहेको छ । समग्र मुलुकको अस्तित्वसंग कसैले पनि आफूलाई जोड्न चाहेका छैनन् । भाषा, संस्कृति, भेषभुषा जेजस्तो भए पनि हामी नेपाली हौं भन्ने भावनाको विकास हुन सकेको छैन । अधिकार चाहियो र अधिकार दिन्छौं भन्नेहरूले हेक्का राख्नुपर्ने विषय यही हो । मुलुकभित्र हरेक जातजातिबीच रहेको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कटुतामा परिणत भैरहेको बेला विदेशीले चलखेल गरिरहेका छन् । यो यथार्थबाट कोही पनि उम्कन पाउँदैन ।
नेपालमा राष्ट्रवाद राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिको औजार बनिरहेको छ । सत्ताबाट बाहिरिएको भोलिपल्टै राष्ट्रियता खतरामा परेको देख्नेहरू थुप्रै छन् र उनीहरू भारतीय विस्तारवादका कारण मुलुकमा समस्या बढेको पनि बताउँछन् । तर सत्तामा पुग्नका लागि भारतीय विस्तारवादकै आशीर्वाद पनि कुरिरहेका हुन्छन् । यो घोर विडम्वना हो र राष्ट्रियतावादको अपमान हो । अब विदेशीको एजेण्डा स्थापित गराउन र नेपालको राष्ट्रियता छिन्नभिन्न पार्न नेपालभित्रै लेण्डुपहरूको जन्म गराइएको छ । धर्म निरपेक्षको घोषणा यसैको कडी हो भने जातीय राजनीतिलाई महत्व दिएर क्षणिक शक्ति आर्जन गर्ने सुझाव पनि अरुकै हो । नेपाललाई साझा फूलबारीको रुपमा स्वीकार गरेर सवैको आ–आफ्नै अस्तित्व कायम गरिएको विगतको महत्वपूर्ण पाटोलाई लत्याएर ‘निरंकुशता र सामन्तवादको अवशेष’को रुपमा चित्रण गर्नुको परिणाम पनि अहिले देखापरिरहेको छ ।
यथास्थितिमा मुलुक धेरै लामो समयसम्म चल्न सक्दैन । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायत यावत् पक्षहरू अहिले भ्रमित छन् । सबैमा राष्ट्रिय चिन्तनको विकास हुनुपर्छ, राजनीतिक दाउपेचभन्दा राष्ट्रियतालाई प्राथमिकता दिन सकियो भने मात्र समस्याहरू समाधान हुनेछन् । जिम्मेवार सवै पक्षले आफूलाई राष्ट्रिय एकताको पक्षमा उभ्याएर ‘अग्रगामी छलाङ’ मार्नुको विकल्प छैन । तर, राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहेर समग्र मुलुकको उत्थान गर्ने चाहना कसैमा पनि छैन । केन्द्रीय राजनीतिको मियो मानिएका दलहरू पनि कुनै न कुनै रुपमा जात, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायसंग नजिक हुन चाहन्छन् । समग्र मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताको अभाव छ । मुलुकको राष्ट्रिय एकता कमजोर हुनुको प्रमुख कारण यही हो र राष्ट्रिय एकता कमजोर हुँदै जानुमा सर्वाधिक दोषी राजनीतिकर्मीहरू नै भएका छन् । हिजो समग्र मुलुकलाई एउटै सूत्रमा आवद्ध गर्ने पूर्वजको मार्गदर्शनलाई ‘प्रतिगामी सोच’ बनाएर मुलुको राष्ट्रिय एकता नै छिन्नभिन्न पार्न उद्यत हुनेहरूको गलत चिन्तनले मुलुकलाई एकढिक्का पार्छ भन्नेमा कसैको पनि विश्वास छैन ।